ခရစ်စမတ်နှင့်ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ် | Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | FromLinux
၂၀၁၁ ခုနှစ်နီးကပ်ခဲ့ပြီးနှစ်သစ်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ကွယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောအမှတ်တရများ၊
2011 ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးဆိုလိုသညျ FromLinux။ အစကတည်းကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစိတ်နှိမ့်ချသောပရောဂျက်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတဖြည်းဖြည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုစီနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မမေ့နိုင်သောအချိန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည် (ယခုသူငယ်ချင်းများ) အမြဲတမ်းသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်
ငါတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ချင်တယ်၊ ငါတို့ကိုကူညီပြီးအကြံပေးတယ်။ ငါတို့ပြုကြသောအရာကိုဝေဖန်။ ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ကြီးထွားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာကြောင့်နှစ်သစ်ဟာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူများလိုအချိန်တွေပိုမိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အနာဂတ်ကဘာလဲ။ ငါတို့မသိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒနှင့်ရည်မှန်းချက်မှာသင်တို့တွင် ဆက်လက်၍ တစ်ခုလုံးကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သည် Libr ဆော့ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အနည်းငယ်မျှလုပ်ဆောင်ပြီးဤစီမံကိန်းကိုလူတိုင်းအတွက်ဘုံနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ အားလပ်ရက်များကိုပျော်မွေ့ပါ၊ နှစ်သစ်၏ရောက်ရှိမှုကိုနှစ်သက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်၍ ကြည့်ရှုကြ ဦး မည်။
မဟုတ်ဘူး၊ Cheetah no၊
0N3R၊ ဘာဂျန်းများ၊ ကားလို့စ်၊ ရဲရင့်ခြင်း၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ၊ Cristhian Duran၊ Dirtyboss, Eduar2, Eduardo, ErunamoJAZZ, francesco (pandev92), fredy, gabriela2400, gespadas, Giskard, Lucas Matias, arturo molina, hypersayan_x, hiram, Irwin Manuel၊ (Erithrym), ယေရှု Ballesteros, Jhals, karlinux, Josh, jdgr00, gnumax, darzee, 0N3R, Fitoschido, Carlos-Xfce, ahdezzz, Gabriel, xgeriuz, Alf, Kik1n, Luweeds, Marco, mcder3, mitcoes, moscosov, nano, nano, TiTan၊ Trece၊ Vladimir_vpabogados, Yoyo နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများအားကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့ပြီးရှေ့သို့တက်ရန်တိုက်တွန်းသောသူများအားလုံး၊ oleksis, Oscar, Perseo, Renata၊
သို့သော်အများအားဖြင့်၊ သင်သည်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းနှင့် <° Linux ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအတွက်သင်မည်သူမဆိုအားများစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FromLinux » ခရစ်စမတ်နှင့်ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်ကူး
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်မွေးဖွားသောအချိန်ကတည်းကအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့သောနှစ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များထက်များစွာသာလွန်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ် XD
ဟုတ်တယ်၊ ငါမင်းကိုအတူတူပဲဆုတောင်းစေချင်တယ်။ အမှန်တရားကတော့ဒီနှစ်အကုန်မှာငါအချိန်သိပ်မရတာ၊ ငါ့ခေါင်းကရှုပ်ထွေးနေတယ်။
သူငယ်ချင်းနှင့် Merry Christmas ကိုနှုတ်ဆက်သည်
Nha သူငယ်ချင်းများ၊ မကောင်းတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ရင်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးရမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်မညည်းညူပါနဲ့။
JAJAJAJAJAJAJA ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျခြင်းသည်မည်မျှဆိုးသည်ကိုသင်မြင်ပါသလား။ ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြောသည် ... ကြည့်ရှုပါ
yeah, ငါ့ဟောင်းဘလော့ဂ် HAHAHAHA မှအချို့သောစျေးပေါကြော်ငြာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အကယ်၍ သင့်အတွက်မဟုတ်ခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့ယခုသိသောလူအများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကိုမသိပါ။ စာမျက်နှာ၏တိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်ကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Isaac ဇာက်၊ မင်းဟာတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပိုများတယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့တယ်၊ တကယ်ကိုမိတ်ဆွေ၊ သင့်အတွက်အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလိုကောင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်နှင့်သင်နှင့်ဘလော့ဂ်နှင့်ဖိုရမ်၏သူငယ်ချင်းကောင်းအားလုံး၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များဖြစ်ပါစေ၊ နောက်နှစ်တွင်သင်၏အိပ်မက်များနှင့်ဆန္ဒများပြည့်စုံလာပါစေ။
PS: Linux မှရရှိသောကောင်းကျိုးများစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်းဟာမိသားစုထဲမှာခဏတာပါ ၀ င်ခဲ့တယ် haha ​​🙂
သင့်ကိုထပ်တူဖြစ်စေချင်သည်။ ဤနေရာတွင်ကောင်းစွာရပ်တန့်ပါစေ။ ဇန်နဝါရီလတွင်သင်တို့အတွက်ကြီးမားသောအံ့အားသင့်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်
အားလုံးတစ် ဦး ကပွေ့ဖက်။
ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသူများမဟုတ်ပါ။ သင့်ထံမှမှတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီသည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ <° Linux သည်ယနေ့ခေတ်တွင်အနည်းငယ်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါကသင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းဂရိတ်လိုဂိုအရမ်းရယ်ရတယ်။ ဘလော့ဂ်စတင်ကတည်းကကတည်းကအကောင်းဆုံးသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ သစ္စာရှိသောစာဖတ်သူထံမှခရစ်စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာရှိသည် (x)
HAHAHAHAHA ငါလိုချင်တဲ့ logo ကိုအရမ်းသဘောကျတယ်၊ အဲဒါကလုပ်တာပဲ Elav
ငါ blog ကိုမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က Xfce (hehe) ကိုကြိုက်တာပဲ၊ Linux အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်ဖို့နဲ့ဖလှယ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာလို့ငါထင်တယ်။ သင်တို့ရှိသမျှကိုနှစ်သိမ့်ပါစေ။ 😀
ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ Xfce ကိုနှစ်သက်သူများ၊ KDE နှင့် Linux HAHAHAHA မည်မျှပတ် ၀ န်းကျင်ရှိထားသည်။
ခင်ဗျားဒီမှာဒီမှာနေလို့ကောင်းတယ်။ ဒါက site ရဲ့စိတ်ကူးပါပဲ
ကြီးမားတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း။ မင်းကိုချီးကျူးချင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာမင်းတို့အားလုံးကိုပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေယူဆောင်လာစေချင်တယ်။
အလားတူပဲ haha, yep ... ၂၀၁၂ ငါတို့အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟဟား၊ ငါတို့အားလုံး LOL အလုံအလောက်မရှိဘူး !!!
နင်းဖို့အေးတဲ့နှစ်။ Frelices Fiestas, တင်ပါးဆုံရိုး။
ခင်ဗျားတို့အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လာမယ့်နှစ်မှာသင် Podcast (OO) အတွက်နေရာချပေးမလားဆိုတာကြည့်ရအောင်။ Debian နဲ့ Arch XD တို့ဆွေးနွေးတာကိုကြားရတာသေသွားနိုင်တယ်။
ဟားဟား!!!! ယခု မှစ၍ ငါဆိုသည်ကား၊ ငါတို့မတတ်နိုင်သောအမှုဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက် sooo နှေးနှေးနှေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဖြစ်နိုင် it
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်နှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောနှစ်သစ်တစ်ခုကျွန်ုပ်သည်ဤနေရာတွင်တစ်လနီးပါးရှိနေပြီ (ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဂရာတာတာကိုရခဲ့သော်လည်း…) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများကိုသင်ယူခဲ့သည်။ Xfce like ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်သည် (၎င်းကို Ubuntu's Gnome 2: P အဖြစ်အလှဆင်ထားသော်လည်း) နှင့် Openbox ကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်း (၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင်မှန်ကန်စွာပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်) ။
ယခုမှာငါသည်ဤမိန့်ခွန်းပြီးနောက်, ငါနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ အထိ! 😀
ဒါပေမယ့်… ssshhh မင်းဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနိုင်ဘူး🙂…။ သင် site ပေါ်တွင် on မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်
ကောင်းပြီ၊ အားလပ်ရက်ကောင်းတဲ့ရာသီရှိတယ်။ လူတိုင်းလက်ခံပါ၊ ခရစ်စမတ်ဖက်ဖက်လိုက်။
ငါဘီယာအကြောင်းပိုမိုမဟုတ်ဘဲသောက်စရာ (မျက်မှန် = ဝိုင်, cider ကဲ့သို့သောအချိုရည်) ။
သင်တို့ရှိသမျှကိုခရစ်စမတ်နှင့်ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်ကူးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၂ သည် GNU / Linux နှင့် Free Software များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောနှစ်ဖြစ်ပါစေ။ ဘလော့ဂ်အတွက်ကံကောင်းခြင်း အလုပ်ကောင်းတွေရှိတယ် မင်္ဂလာပါနှင့်အများကြီးသာယာဝပြောတဲ့။
ဟုတ်တယ်…ဒီနှစ်အသစ်ဟာ Windows LOL မှလွဲ၍ လူတိုင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။
ငါမှတ်ချက်ပေးတာပိုကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကငါ့ကို EMO လို့မခေါ်ဘူး
ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့ KZKG ^ Gaara အတွက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်၊ အဲလပ်ကလူတစ်ယောက်ကိုမကြိုက်ဘူး၊ Eduar2 ကသူ့ tutorial ကိုပြီးအောင်လုပ်တယ်၊ ငါကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်ပါ။ ခရစ်စမတ်စုပ်ယူလျှင်သင်ပျော်ရွှင်မှုနှင့် Blah Blah ကိုမကြိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်မှားကြောင်းကျွန်ုပ်ယခုငါတို့ပြောသောအရာအားလုံးကိုငါတို့အားလုံးသိသည်။ 😀
ဟားဟားဟင့်အင်း LOL အဖြစ်မှန်ကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး !!!!
ခရစ္စမတ်အကြိုညစာစားပွဲကိုပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် because be ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်ပွဲကိုမကျေနပ်ပါစေနှင့်
အိုလံပစ်မှာမပျော်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဥပဒေရှိတယ်၊ အဲဒါကမပျော်ရွှင်ချင်ဘူး၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူး
လာပါ၊ သင်ပျော်ရွှင်နေကြောင်းလက်ခံရန်ခဲယဉ်းပါသည်။ သင်နှစ်သက်သောအတိုင်းအတာအထိမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်တစ်စုံတစ်ရာသည်ဘာမျှမက သာ၍ ကောင်းပါသည်😀
[i] …ပျော်ရွှင်မှု GNU / Linux … [/ i] XD ကျန်အရာအားလုံးအတွက်
စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ပျော်ရွှင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့မ ၀ င်မှီတိုင်အောင် ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ခရစ်စမတ်ကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်၊ လူတိုင်းဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးအရူးလုပ်တတ်လာကြတယ်၊ နှစ်သစ်ကူးအကြောင်းလူတိုင်းကမင်းကိုပွေ့ဖက်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့နှစ်သစ်ကိုလိုချင်ကြတာပဲ။
atte: အဆိုပါ Grinch ။
အားလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအားလပ်ရက်များဖြစ်ပြီး XD တွင်ပျံနှံသောထင်းရှူးပင်များပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်
ကံကောင်းခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ဤကောင်းမွန်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ၄ င်းတို့မိသားစုများအတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း။
[ခ] @Admins [/ b] ကျွန်ုပ်အကြိမ်ကြိမ်သောဘလော့ဂ်များတွင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောကျွန်ုပ်တို့၏အမည်ပြောင်များပါဝင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ¬_¬ မူရင်းကိုကျွေးမွေး😀
ဘာမှမ ... ကျွန်ုပ်တို့တွင်သုံးစွဲသူများစွာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်ဆောင်းပါးအားအသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်များစွာသောထည့်သွင်းခြင်းများပြုလုပ်ထားသည်။ မှတ်ချက်မှာမှတ်ချက်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရှိပြီးသုံးစွဲသူများကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသော HAHAHA နှင့်ဆင်တူသည်။
nicknames ကိုဘာကြောင့်ထည့်ရတာလဲဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ ငါအကြိမ်ကြိမ်ပြောဖူးတယ် said
သင်ဆိုဒ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်က၎င်းကိုခေါ်လိုပါက၎င်း၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲဤ post ကိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၎င်းသည်သရဲတစ္ဆေအိမ်ကဲ့သို့ ... ဘ ၀ မရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ်စမတ်လူတိုင်း !!! 😉
ဒီနှစ်သူတို့ကိုဖတ်ရတာဝမ်းသာစရာပဲ။ သူတို့ရေးသားခဲ့သည့်ရေးသားချက်များမှ၎င်း၊ သူတို့နောက်လိုက်သောရပ်ရွာလူထု၏ပံ့ပိုးမှုများမှလည်းကောင်းသင်ယူပါ။
Gnome2၏သက်သောင့်သက်သာသည်နောက်ဆုံးအဆုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်ကိုသိရှိပါ။
Gnome နှင့်အတူ Fedora ထားခဲ့ပါ။
အားလုံး distros စမ်းသပ်စတင်ပါ။
- အခြားဆက်နွယ်မှု ၂ ခုသို့မဟုတ် ၃ ခုမှအစနှင့်အဆုံး
- ပြီးတော့ငါတောင်ပိုကောင်းတဲ့ hehehe မရေတွက်ဘူးသောအခြားအရာ ...
- အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစီမံကိန်းတစ်ခုစတင်ခြင်း၊ <° Linux 😀
- အထက်ပါအချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အေးမြသောလူများစွာ၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အချင်းများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောခံစားချက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါသည်။
- ArchLinux ကိုသေချာအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
- ငါသည်ငါ့အမြစ်သို့ပြန်သွားလေ၏ဆိုလိုသည်မှာ ... ငါနောက်တဖန် KDE ကိုသုံးပါ * - *
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... အားလုံးကိုမင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်မနေ့က (၂၄) ကျွန်တော့်အစ်မအိမ်မှာအကောင်းဆုံးအချိန်ရှိခဲ့တယ်။
PS: Eduar2 ပြောနိုင်သည့်အချက်များနှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် anti-Ubuntu သို့မဟုတ် Ubuntu လိုလားသောဘလော့ဂ်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘလော့တစ်ခုသာဖြစ်သည်😀
- နောက်ဆက်တွဲ ၂ ခုမှ ၃ ခုဆက်နွယ်မှု၏အစနှင့်အဆုံးသည်ငါနတ်ဘုရား XD ထက်ချိုသာစွာနှင့်ကျန်ခဲ့သည်
- Ciutadans ၌ငါ့ဇာတ်စင်၏အဆုံး
- ငါ xd ခဲ့သည့်ထင်ယောင်ထင်မှားမှုအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်
အစီအစဉ်စတင်ပြီး ၆ လ xD မှာ PC ကိုအပိုင်းပိုင်းနဲ့ဝယ်တယ်
ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ရေးသားခြင်းနှင့် mcanime အလယ်အလတ်
ငါကျိန်းသေ Chakra ကိုသုံးပါနှင့်များစွာသော developer များနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့သည်
ငါကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ချင်တယ်။ (XD ကိုဒီမသိရဘူး ... )
- Put ၏ကျေးဇူးကြောင့်ခိုင်မာသည့်စိတ်ကျမှု *
- ၂ ဆံပင်ရွှေရောင်များကကျွန်ုပ်ကိုအထက်တန်းကျောင်းတွင်ထူးဆန်းစေသည်
- ကျွန်ုပ်သည် metalhead ဖြစ်လာသည် (မှန်ပါသည်၊ KZKG ^ Gaara ကဲ့သို့ပိုစတာမဟုတ်ပါ)
- လွန်ခဲ့သော ၃ လကကျွန်ုပ်အတွက်ငရဲအတွက်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ရန်
- ငါ Arch Linux သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်
- Linux ကိုသုံးဖို့ငါခဏတာပဲ
- ငါပထမ ဦး ဆုံးဘလော့ဂ်၌ c *** အတွက်သောက်ရန် elav ကိုလွှတ်လိုက်သည်
- ubuntosos နှင့်တိုက်
- ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သူများ၏တစ် ဦး ဆံပင်ရွှေရောင်မှ flash ၏ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်
- ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ၏ hard drive သည်အရှိန်မြင့်လာပြီးကျွန်ုပ် Hasefroch ကိုအသုံးပြုရသည်
မှော်စကားလုံး EMO ကိုပြောခြင်းကိုရှောင်ပါ
၁- ငါးနှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်အချိန်နှင့်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် Beatles ထံဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောကျွန်ုပ်၏ဖိုရမ်မှထွက်ခွာခဲ့သည် (အမှန်မှာပျင်းရိသူများစာရေးရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသာလိုသည်။ )
4.- ငါငါ့ခမည်းတော်နှင့်အတူကြီးစွာသောအားလပ်ရက်နှစ်ခုနေခဲ့ရသည်။ ငါမက္ကစီကိုသို့ပြောင်းရွှေ့ကတည်းကအရာဖြစ်ပျက်မထားပါဘူး
စိတ်ကိုပစ်ချသည့် geek ricónတွင်:
Ubuntu ကို Unity နှင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သုံးပတ်အကြာတွင် Linux Mint သို့ပြန်သွားသည်။
ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းမှားနေတယ်။ မှန်တာကတော့ -
သင့်အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်။ 😀
ဟိုဟိုဟိုပျော်ရွှင်တယ် ... နောက်ဘာလဲ
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်ကူးဖြစ်ပါကဒီဆုကိုရရှိသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ site အတွက်တကယ်ကိုအသစ်ဖြစ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောအားသာချက်ရှိသည်။ မည်သူ့ကိုမျှမသိပါ၊ နာမည်နှင့်အမည်ပြောင်များစာရင်းကိုရေးသားရန်ကတိကဝတ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတစ်စုံတစ်ယောက်အားသေတ္တာထဲမှထွက်ခွာရန်ရှက်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးသူတို့၏အချိန်အများစုကိုအချိန်ယူဖြည့်ဆည်းပေးသောသူများအတွက်ဤပြissuesနာများကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းအားကျေးဇူးတင်ရန်မှာမလွဲ,ကန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ထောက်ခံအားပေးသူအုပ်စုအားလုံးကိုသူတို့၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်မှတ်ချက်များအားပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တို့ရှိသမျှကိုတစ်ထောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့် 2012 အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးဆောင်ခဲ့ရမည်။
Tutorial: KahelOS ထည့်သွင်းမှု